सर्पले टोकेपछि प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
सर्पले टोकेपछि प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने ?
जेठ २७, २०७६ सोमबार १४:३६:६ | डा. शेरबहादुर पुन
काठमाण्डौ – गर्मी मौसममा सर्पले टोक्ने जोखिम उत्तिकै हुन्छ । सर्पले टोक्नुलाई सर्पदंशका रुपमा लिइन्छ । तराइ क्षेत्रमा गर्मीको मौसममा सर्पले टोकेका बिरामी संख्या अरु क्षेत्रको भन्दा तुलनात्मक रुपमा बढी हुने गर्छ ।
सर्प देख्ने बित्तिकै जो कोही पनि तर्सने र धेरैलाई त टोक्यो कि मरिन्छ भन्ने भ्रम रहेको पाइन्छ । अस्पतालसम्म पुग्नुभन्दा अगाडि बिरामीले तुरुन्त र सही प्राथमिक उपचार पाए सर्पदंशबाट हुने मृत्युलाई रोक्न सकिन्छ ।
१) सबैभन्दा पहिले बिरामीलाई उत्तेजित हुनबाट रोक्ने वा शान्त बनाउनु पर्छ । सबै सर्पले टोक्दैमा विष छोडेको हुँदैन, जसलाई ‘ड्राइ बाइट’ भनिन्छ । नेपालको पूर्वी तराइमा गरिएको एक अनुसन्धानले १० प्रतिशत टोकाइमा मात्र सर्पको विष हुने गरेको देखिएको थियो ।
२) बिरामी सकेसम्म नचलिकन बस्नुपर्छ । टोकेको ठाउँमा क्रेप्ट ब्यान्डेज बाँध्नुपर्छ तर धेरै कडा गरेर बाँध्नु हुँदैन । टोकेको ठाउँ नचलोस् भन्नका लागि काठको काप्रो (स्प्लिन्ट) प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
३) टोकेको ठाउँलाई मुटुको लेबलभन्दा मुनि राख्नुपर्छ ।
४) शरीरमा लगाएको कपडा कसिएको भए तथा घडी वा गरगहना लगाएको भए निकाल्नुपर्छ ।
५) अनि जतिसक्दो चाँडो अस्पताल पुर्‍याउनुपर्छ ।
के गर्नु हुँदैन ?
१) घाउमा चक्कुले काट्ने, चुस्ने वा कुनै रसायन लगाउनु हुँदैन ।
२) धामी झाक्रीको विधि प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
३) टोकेको ठाउँमा कुनै कडा रबर (तन्कने वस्तु) ले बाँध्नु हुँदैन, यसबाट टोकेको ठाउँ वरिपरि कालो हुने वा ग्यांग्रिन भई सर्पले टोकेको ठाउँ नै काटेर फ्याँक्नु पर्ने हुनसक्छ ।
४) मद्यपान (जाँड-रक्सी) खानु हुँदैन ।
अन्तिम अपडेट: मंसिर १, २०७८